Makore zana Gare gare: Humambo hweMunyoreri | Martech Zone
Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Douglas Karr
Ichi chiziviso kubva muna Chivabvu 1916 chinyorwa cheMaitiro Akakurumbira kubva kuAT & T achitaura kune vangangonyoresa nhare.
Ini ndinowanzo shamisika kuti zvaive zvakaoma sei kukunda kutya uye kutya iyo tekinoroji inofanira kunge yakakonzera panguva iyoyo. Ini zvakare ndinoshamisika kuti inofananidzwa sei nevemagariro midhiya kutora uye neInternet nhasi.
Mafoni, seInternet, akachinja zvakanyanya hupenyu. Muna 1926, Knights yeColumbus Adult Education Committee yakatobvunza mubvunzo kuti, "Zvigadzirwa zvemazuva ano zvinobatsira here kana kukanganisa hunhu uye hutano?"
Neichi chiziviso, AT & T yanga ichirerutsa veruzhinji kutya hunyanzvi uye pachinzvimbo ichi, ichidzidzisa veruzhinji kuti tekinoroji yakavapa simba sei.
Zvinotaridza kuti kushambadza uku kunogona kunyorwazve nhasi, neInternet yakamisikidzwa mu:
Mukuvandudza kweInternet, mushandisi ndiye akakosha chinhu. Izvo zvavanoramba vachikura zvinodiwa zvinokurudzira kugadzirwa, zvinotungamira mukusingaperi kwesainzi research, uye nekuita zvakakosha kukura kukuru uye kuwedzera.
Hapana mabhureki kana mari inodzivirirwa kuvaka iyo Internet, kuwedzera simba remushandisi kusvika pamugumo. MuInternet iwe une yakakwana kwazvo mashandiro munyika yekutaurirana. Iyo inoratidzirwa nemweya wakakura kwazvo webasa, uye iwe unoitonga uye kuidzora mune huviri hunyanzvi hwemushandisi uye mupi wedata. Indaneti haigone kukufungira kana kukutaurira, asi inotakura pfungwa yako kwaunoda. Zviri zvako kushandisa.
Pasina mushandirapamwe wemushandisi, zvese izvo zvakaitwa kugadzirisa iyo system haina basa uye basa rakakodzera harigone kupihwa. Semuenzaniso, kunyangwe hazvo makumi emabhirioni akashandiswa kuvaka Internet, zvinonyarara kana munhu kune rimwe divi akatadza kuishandisa.
Indaneti inonyanya kusununguka; inotakura izwi remwana uye akura aine yakaenzana kumhanya uye kunanga. Uye nekuti mushandisi wega wega chinhu chakakosha muInternet, iyo Internet ndiyo yakasununguka kwazvo inogona kupihwa pasi rose
Haisi chete kuitisa kwemunhu, asi inozadzisa zvido zvevanhu vese.
Zana ramakore gare gare, uye isu tichiri kurarama muHumambo hweMunyoreri!
Tags: pa & tIndanetiumambo hwekunyoreraKnights of columbusmakanika akakurumbiraSubscribersnhare